Ny mombamomba ireo zanabintanaHanova
Ny Adaoro no vintana sy volana faharoa. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro. Trotroin'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Adaoro. Mifandratra amin'ny Alakarabo sady mihataka sy miarina eo amin'ny Adimizana ny Adaoro.
Vintana sy volana fahatelo ny Adizaoza. Ny toerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano antsinanana. Ny Alakaosy no mifandratra amin' ny Adizaoza sady miarina eo amin'ny Adijady. Baben'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Adizaoza.
Ny Alahasaty no vintana sy volana malagasy fahadimy. Ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Lazaina ho vinta-mpamosavy sy andron'ody ny Alahasaty. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty. Trotroin'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Alahasaty.
Vintana sy volana fahenina ny Asombola. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Alohotsy sy miarina eo amin' ny Alahamady ny vintana Asombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola.
Ny Alakarabo no vintana sy volana fahavalo. Ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Miarina eo amin'ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adaoro ny vintana Alakarabo. Trotroin'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Alakarabo.
Ny Alakaosy dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adizaoza ny Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany. Baben'ny renivintana Adijady ny zanabintana Alakaosy.
Vintana sy volana faharaika ambin'ny folo ny Adalo. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Alahasaty sy miarina eo amin'ny Asorontany ny vintana Adalolo. Trotroin'ny renivintana Adijady ny zanabintana Adalo.
Vintana sy volana faharoa ambin'ny folo ny Alohotsy. Ny tapany antsinana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Asombola sy miarina eo amin'ny Adimizana ny vintana Alohotsy. Baben'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Alohotsy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zanabintana&oldid=1036428"
Dernière modification le 21 Aogositra 2021, à 14:20
Voaova farany tamin'ny 21 Aogositra 2021 amin'ny 14:20 ity pejy ity.